Gbasara anyị - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Ihe nkiri chere ihu na plywood
OSB (entedkpụrụ na-achịkwa usoro)
Ọrụ Mbubata Na Mbupụ
Mmeputa ulo oru
Otu Worldwa Uwabụ nnukwu onye nrụpụta na mbupụ plywood na ngwaahịa ndị metụtara ya na China, nke hiwere na 1993 nwere ndị enyemaka 6. Ugbu a, anyị na-anụ ụtọ usoro mmepụta nke 73 nke plywood na plywood mara mma.
Anyị arụpụta nile di iche iche nke plywood bụ 220,000m3 na 1,000,000m3 maka film chere ihu plywood kwa afọ. Ejiri ọtụtụ igwe dị elu, Italian IMEAS sanders, Japanese UROKO peeling machines, Veneer Joint Tenderizers na nnukwu akụrụngwa akụrụngwa, ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịmịpụta na mbupụ ngwaahịa kachasị mma na fim ahụ plywood na plywood mara mma na Antiskid Plywood.
Anyị emeriwo nsọpụrụ nke "Ahịa Mara Mma nke China", "Ngwaahịa A Tụkwasịrị Obi Jiangsu" na "AAA Corporate Ebe E Si Nweta".
Companylọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike na ụkpụrụ nke njikwa mma na ịkwụwa aka ọtọ mgbe niile.
Na anyị na ngwaahịa a gbaara site IS09001: 2000, IS014001: 2004, OA, FSC, BFU na e ọma rere ka ihe karịrị 100 mba n'ụwa nile, dị ka Germany, Australia, USA, Chile, Libya, UAE, Saudi Arabia , Korea, Japan, na ndị ọzọ.
Na ebumnuche nke inye nri maka ihe ahịa nke ụwa zuru ụwa ọnụ, anyị kwadoro ọtụtụ ndị na-ere ahịa ụlọ a ma ama, anyị nwere ọrụ ịhazi na OEM maka plywood na arịa ha.
Dabere na anyị elu àgwà management, mma-sevice na-eduga technology, Home ụwa otu ifịk ifịk na-eduga ndị ahịa na-ewe mpako na àjà ndị a ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa anyị.
Banye maka akwukwo ozi anyi iji na-adị ọhụhụ na nkwalite anyị, mwepu ego, ahịa, na onyinye pụrụ iche
Okwu: Senso Center, Pizhou City, Jiangsu Province, China